Thwebula Krita 3.1.1 – Vessoft
English (United States), Afrikaans, Українська, Français...
Krita – a ihluzo editor onamandla ukuba zisebenze nalawo Umdwebo digital. Isofthiwe ine isethi enkulu amathuluzi nokuhlunga ahlukahlukene ukudala noma hlela izithombe. Krita kwenza ukusebenza nge raster kanye Vector ihluzo, isibuko umfanekiso indwangu, ezahlukene imbondela izindlela, lezinto ngabanye, njll Isofthiwe isekela ethandwa amafomethi image nombala models. Krita futhi inikeza amathuluzi amaningi ezengeziwe ukuze ulungiselele software for izidingo siqu umsebenzisi.
Ezahlukene Umdwebo Amathuluzi
ehlunga Abaningi nemithelela image processing
Inani elikhulu izilungiselelo
Usekela takhiwo ehlukahlukene image nombala models
Amazwana on Krita:
Krita Ahlobene software:
Isithombe Ithuluzi ukusebenza izithombe kanye nezithombe. Isofthiwe ehlunga eziningi futhi ikuvumela ukuba wengeze imiphumela ehlukahlukene noma ukudala amaphrojekthi ngokuzenzakalelayo.
Umbhalo abahleli Isofthiwe ukuba babhale izincwadi, izihloko zesayensi kanye nezincwadi on sciences ngqo okuqukethwe ehlanganisa nzima zezibalo.